Xukuumadda iyo Beesha Caalamka oo shir heerkiisu sarreeyo ku yeeshay qadka la iska arko - Jowhar Somali Leader
Home Somali Xukuumadda iyo Beesha Caalamka oo shir heerkiisu sarreeyo ku yeeshay qadka la...
Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre iyo mas’uuliyiin ka socota midawga Afrika, IGAD, Qaramada Midoobay, Midawga Yurub, Turkiga, Ingiriiska, iyo Mareykanka, ayaa qadka iska aragto ee Mareegta Internet-ka ku yeeshay kulan heerkiisu sarreeyo oo looga hadlay arrimaha Soomaaliya.
Kulankan oo uu soo qaban qaabiyay Midowga Afrika ayaa looga hadlay Horumarada dowladda Soomaaliya gaartay, caqabadaha jira iyo tallaabooyinka la qaadayo xilliga kala guurka.
War saxaafadeed ka soo baxay Xafiiska Ra’iisul Wasaaraha oo looga hadlayay kulankan, waxaana Ra’iisul Wasaaruhu uu sheegay in hoggaanka dalka ay ka go’antahay dib-u-habeynta hey’adaha dowladeed, in lagu taagnaado wadada dib-u-kabashada dhaqaalaha iyo in lagu guuleysto Soomaaliya nabad iyo barwaaqo ah.
Qoraal uu bartiisa Twitter-ka ku soo qoray Wasiirka Arrimaha dibadda Turkiga Mevlut Cavusoglu ayuu ku sheegay in shirka looga hadlay tallaabooyinka si wadajir loo qaadayo in lagu taageero kala guurka siyaasadeed iyo geedi socodka nabada Soomaaliya wixii ka dambeeyay marka la soo afjaro cudurka COVID19.
“Mar kasta waxaa garab istaagi doona Soomaaliya si saaxiibtinimo iyo walaaltinimo ah”ayuu yiri Wasiirka Arrimaha Dibadda Soomaaliya.
Xaalada uu shirkan ku soo aaday ayaa ah, iyadoo dowladda Federaalka Soomaaliya ay muddo xileedkeeda gabogabo ku dhow yahay, lana filayo in bilaha soo socda uu dalku galo kala guur siyaasadeed oo ah xilliga la diyaarinayo doorashooyinka soo socda.